Taunggyi - The Cherry Land: ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးများ
တိမ်တွေကို ထိတွေ့ခံစား ကြည့်ချင်တယ်။ အတောင်ပံတစ်စုံ ရရှိခဲ့ရင် တိမ်တွေဆီကို ပျံသန်းမိမှာပါ။ တိမ်စိုင်တွေက နူးညံ့နေမလား။ တိမ်ညိုတွေ နဲ့ အဖြူရောင်တိမ်တိုက် ဘယ်အရာက ပိုအေးမြမလဲ။
တိမ်တွေကို ထိတွေ့ခံစား ချင်တယ် . . . ။
မနေ့ညက တိမ်တွေထဲကို ရောက်သွားတယ်။ ပျံသန်းစရာ မလိုပဲ တိမ်တွေကို ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်။ ပြတင်းတံခါး ကနေတိမ်စိုင်တချို့ အခန်းထဲဝင်လာတယ်။ အပြင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မလှမ်းမကမ်းက အရာဝတ္ထုတွေက မှုန်ဝါးဝါး။ မြို့လေးဆီကို အလည်လာတဲ့ တိမ်တိုက်တချို့။ ခြေလှမ်းတွေက တစ်လှမ်း၊ နှစ်လှမ်း ၊ သုံးလှမ်း . . ။
ကျွန်တော် တိမ်တွေထဲကို ရောက်သွားပြီ။ လမ်းမီးရောင်တွေက အလင်းမပေါက်နိုင်တော့ပဲ မှိန်ဖျော့ဖျော့ အဝိုင်းတွေ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းကုန်ကြတယ်။ ထီးဆောင်းထားတဲ့ လမင်းလိုပေါ့။ မျက်နှာမှာ လာထိတွေ့တဲ့ ရေမှုန်သေးသေးလေး တွေရဲ့ အထိအတွေ့က နူးညံ့အေးမြလို့နေတယ်။ ဆံပင်နဲ့ မျက်တောင်တွေ ပေါ်မှာ ရေစက်တချို့။ လမ်းလယ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ထင်းရှူးပင်တွေလဲ ပျော်နေကြမယ် ထင်တယ်။
တိမ်တွေပြန်ထွက်ခွာ သွားတော့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေစုံနေပြီ။ ခွဲခွာသွားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဆောင်းရဲ့ ရနံ့တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို တွေ့လိုက်သလိုပဲ။ မတွေ့တာ ကြာပေမယ့် ရင်းနှီးနေပြီးသား ဆိုတော့ အေးမြသလို နွေးထွေးတယ်။ ဆောင်းရက်တွေ မြန်မြန်လာစေချင်ပြီ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ . . . ။
ရေးသားသူ ကိုချမ်း အချိန် 11:15:00 AM
ကိုချမ်းရေ..ကျွန်တော်လည်း ဆောင်းရက်တွေကို ရောက်ချင်နေပြီ ...တန်ဆောင်တိုင်ပွဲလာတော့မှာမို့လေ...
Friday, May 27, 2016 4:34:00 PM
Stephen Curry Shoes At Foot Locker
Precio Adidas Ultra Boost
wmns nike free barato
men's adidas superstar2sneakers
Nike Kevin Durant günstig online kaufen
Nike Performance FLEX EXPERIENCE4Zapatillas
Sunday, June 05, 2016 1:40:00 PM